Putin oo heegan sare galiyay Ciidamada Nukliyeerka ee Ruushka. – XAMAR POST
–Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa amar ku bixiyay in ciidamada nukliyeerka Ruushka ay heegan sare galaan maanta oo Axad ah si ay uga jawaabaan waxa uu ugu yeeray “hadallada gardarada ah” ee hogaaminaya awoodaha NATO.
Amarka Madaxweynaha ayaa ka dhigan in Putin uu doonayo in hubka Nukliyeerka ee Ruushka uu u diyaar garoobo kordhinta diyaargarowga uu ku bilaabayo, Isagoo sare u qaaday khatarta ah in duulaanka Moscow ee Ukraine iyo jawaabta reer galbeedka ee ay ku karkarin karto dagaal nukliyeer ah.
Sidoo kale, Xafiiska madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in wafdi uu la kulmi doono saraakiisha Ruushka iyadoo ciidamada Moscow ay ku sii dhowaanayaan Caasimada Ukraine ee Kyiv.
Isagoo sii hadlayay kulan waxaa uu ka hadlay kulan uu la qaatay saraakiishiisa sare, Putin wuxuu u sheegay wasiirkiisa difaaca iyo taliyaha guud ee ciidamada inay ciidamada ka hortagga nukliyeerka geliyaan “Nidaamka gaarka ah ee waajibaadka dagaalka.”
MD Farmaajo oo la kulmay Wefdi Sare oo ka socda Midowga Afrika